MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYADA BULLDOG EE MAREYKANKA - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyada Bulldog ee Mareykanka
Coreah Bulldog Mareykan ah oo jira 21 bilood
Bulldoggee Mareykan ah
Muruqa, adag oo xoog badan, hadana qaabdhismeedka iswaafajinta ee Bulldog-ka Mareykanka ayaa wali ka sareeya lugta, aadna uga dhaqso badan kana dheereeya kan dhiggiisa Ingiriiska ah. Shakhsiyaadka qaarkood ayaa lagu soo waramayaa inay awoodaan inay ku boodaan lix cagood ama ka badan hawada. Ragga ayaa dabeecad ahaan ka xoog badan isla markaana ka laf culus dumarka dheddigga badan. Madaxa waa weyn yahay oo daaman xoog leh. Dhaqdhaqaaq iyo iftiin cagihiisa, laabta waa mid ballaaran oo dhex dhexaad ah, oo siineysa dareenka kartida ciyaaraha iyo awooda. Qoorta ayaa muruq ah, oo garbaha ka taabanaya ilaa madaxa waxaana laga yaabaa inay yeelato wax yar oo dharab ah. Madaxa waa laba jibbaaran, ballaaran oo ballaaran leh dhabannada muruqyada oo qiyaas ahaan u dhigma cabbirka iyo qaab dhismeedka eeyga oo dhan. Waxaa jira furro qeexan oo udhaxeysa indhaha wareega, oo leh kala duwanaansho, sifiican loo qeexay, joogsi qoto dheer. Xuubka xooluhu waa mid ballaadhan oo laba jibbaaran. Qaniinyada la doorbido waa maqas gadaal ufiican, laakiin qaniinyo dhexdhexaad ah, maqas ama xitaa qaniinyo waa la aqbali karaa. Noocyo kala duwan oo dhegta ah ayaa la aqbali karaa oo ay ku jiraan goos goos, ubax, kala-barar iyo wejiga hore. Dhegaha aan la fiiqin ayaa laga door bidaa heerka American Bulldog Breeders Association. Indhuhu badanaa waa bunni, laakiin waxay ku imaan karaan midab kasta. Waxay mararka qaarkood yeeshaan indho kala jaban, oo midkood isha uu bunni yahay, tan kalena ay buluug tahay. Cirifka indhaha madow ayaa laga door bidaa eeyaha cad. Muraayadaha indhaha ee casaanka ah waxaa loo tixgeliyaa cillad sida ku cad heerka qoraalka. Sanka waa madow, casaan, bunni ama mugdi madow waa midabka la doorbido marka loo eego heerka. Eeyaha sanka madow, midabka bushimaha la doorbido waa madow, in kastoo casaan qafiif ah la oggol yahay. Dibnaha waa inay buuxsamaan laakiin aan aad u dabacsaneyn. Lugaha hore waa kuwo culus, xoog leh oo toosan. Xaga dambe waa inuu ahaadaa mid aad u ballaaran oo qaro weyn oo leh muruqyo si fiican loo qeexay. Dabada ayaa hooseysa, oo dhumucdiisuna ku bilaabantaa salka, oo ay taabataa meel. Koodhku wuu siman yahay oo wuu gaaban yahay, wuxuuna ku yimaadaa dhammaan hooska gogosha oo ay ku jiraan guduudka cas, heerar kala duwan oo cadaan, casaan, bunni, cagaar, fawn iyo piebald.
Bulldog-ka Mareykanka waa mid daacad ah, lagu kalsoonaan karo, geesi ah oo go'aan leh. Maaha eey colaadeed. Feejignaan iyo isku kalsooni, noocani wuxuu si dhab ah u jecel yahay carruurta. Waxay caan ku tahay ficillada geesinimada leh ee sayidkeeda. Waxay leedahay dareen xoog leh oo ilaalin ah, waxayna u baahan tahay shirkad, kalsooni, iswaafaqsan hogaamiyaha xirmada . Bulsho wacan iyo tareenka adeeca iyaga da 'yar, si looga ilaaliyo inay ku ekaadaan shisheeyaha. Taas la’aanteed hogaamiye xirmo maskax adag yaa u sheegi kara eeyga waxa laga filayo, waxaa laga yaabaa inuu dagaal kula galo eeyaha kale. Waxay ubaahan yahiin inay lajiraan dadka isla markaana ogaadaan meesha ay kujiraan xirmadooda si ay si run ah ugu farxaan. Noocani wuxuu u eg yahay inuu hoos udhaco oo caayo. Iyadoo aan maalin ku filnayn jimicsi maskaxeed iyo mid jireed waxay noqon doonaan kuwa aad u sarreeya waxaana laga yaabaa inay adkaato in la maareeyo.
Dhererka: Ragga 22 - 28 inji (55 - 70 cm) Dumarka 20 - 26 inji (52 - 65 cm)
Miisaanka: Ragga 70 - 120 rodol (32 - 54 kg) Dumarka 60 - 100 rodol (27 - 45 kg)
U nuglaanshaha dysplasia sinta
Bulldog-ka Mareykanka wuxuu ku fiicnaan doonaa guri dabaq ah haddii si ku filan loo jimicsado. Iyagu gudaha waxoogaa kama hawlgalaan waxayna ku fiicnaan doonaan ugu yaraan deyr dhexdhexaad ah.
Bulldog-ka Mareykanka waa in lagu qaataa a socod dheer oo maalinle ah. .
Ilaa 16 sano
Celcelis ahaan 11 eeyo
Koodhka gaaban, ee adag waa sahlan tahay in la xajiyo. Shanlo oo ku caday burush adag, oo maydh markii loo baahdo oo keliya. Noocani waa celcelis daadiya.
Bulldogs-kii asalka ahaa ee Mareykanka looma adeegsan jirin oo kaliya isboortiga dhiiga badan leh ee dibiga, laakiin sidoo kale waxaa loo adeegsaday beeralayda yaryar iyo kuwa xoolaha u isticmaala eeyaha ey ka shaqeeyaan hareeraha shaqooyin badan oo ay ka mid yihiin ilaalada iyo ugaadhsashada ugaarsiga, duurjoogta, rakoon iyo dabagaale. Nooca Mareykanka ee Bulldog wuxuu leeyahay lugo dhaadheer, waa ka dhaqso badan yahay kana firfircoonyahay kan English show eyga . Awoodda eyga, ilaalintiisa, sirdoonkiisa iyo kartidiisa shaqo ayaa isaga ka dhigaysa shaqaale qaali ku ah beeraleyda. Waxaa loo tababbari karaa inay kaxeeyaan lo'da iyo inay ka ilaashadaan kaymaha. Thanks to dadaalka John D. Johnson ee Summerville, Georgia, American Bulldog ayaa jira maanta. Ka dib markii Johnson uu ka soo noqday WWII wuu ka niyad jabay inuu ogaado in, sida Ingiriisi Mastiff, ay ahayd ku dhowaad gebi ahaanba bakhtiyey . Kadib wuxuu go'aansaday inuu soo uruuriyo muunadyadii ugu fiicnaa ee uu ka heli karo dhamaan daafaha koonfurta miyiga isaga oo dadaal ugu jira sidii Bulldog-kii Mareykanka looga soo celin lahaa qarka u saaran inuu baabi'iyo. Waxa uu soosaarayay eeydan in kabadan kuwa kale ee dunida aabihiisna isaga kahor ayuu kudayacay. Waa nin da 'ah hadda eeyahaani waligoodba way ku dhex jireen qoyskiisa. Isagu waa sababta keliya ee ay maanta u jiraan. Hadaanu dadaalayaashiisu jirin hubaal way bakhti lahaayeen. Wuxuu si aan kala joogsi lahayn u dhalaayay iyaga ilaa waqtigaas. Qaar ka mid ah hibooyinka Mareykanka Bulldog waa ugaarsi, ilaalin, dabagal, culeys jiidan iyo ilaalin.
AABC = Dhamaan Naadiga Bulldog-yada Mareykanka
ABCC = Naadiga Bulldog ee Mareykanka ee Kanada
JDJB = John D. Johnson Diiwaanka Bulldog
NABA = Ururka Bulldog Qaranka Mareykanka
NAPR = Diiwaangelinta Nadiifka ee Waqooyiga Ameerika
Eeg tusaalooyin badan oo Bulldog Mareykan ah
Sawirada Bulldog Mareykan 1
Sawirada Bulldog Mareykan 2
Sawirada Bulldog American 3
Sawirada Bulldog Mareykan 4
Sawirro Bulldog Mareykan ah 5
Sawirro Bulldog Mareykan ah 6
Sawirada Bulldog Mareykanka 7
Sawirada Bulldog American 8
Sawirro Bulldog Mareykan ah 9
cocker spaniel shih tzu qas puppy puppy for sale
xadka collie & labrador isku dhafka retriever
collie xadka qas CORGI eey yar
nooca eey waa whoodle a
chow chow iyo shaybaarka isku dhafan